Telecoms Archives - Page 2 of 13 - The Source
HARARE, April 21 (The Source) – Econet Wireless Zimbabwe major shareholder ,Econet Wireless Global will control 40 percent of the telecoms firm following a $130 million rights offer which left a quarter of the shares on offer unsubscribed. The company on Friday published the results… Read More
HARARE, March 29 (The Source) – Econet Wireless Zimbabwe’s $130 million rights issue was undersubscribed by over 75 percent, mirroring the depth of the country’s liquidity crunch, with the underwriter pumping in $100 million, according to officials with knowledge of the transaction. Econet Wireless Global,… Read More
Econet’s $130mln capital raise gets shareholder nod
HARARE, February 3 (The Source) – Econet Wireless Zimbabwe’s shareholders on Friday voted to approve the highly contentious $130 million rights issue, with 74 percent of the votes at an extraordinary general meeting. The EGM went ahead despite strong opposition from the Zimbabwe Stock Exchange… Read More
HARARE, January 31 (The Source) –. The Zimbabwe stock exchange mainstream index eased 2,97 percent in January to close at 140,24 points after mobile operator, Econet Wireless’s share price dropped by nearly half to 16,87 cents, its lowest since March 1, 2013. Econet, the country’s… Read More